BNI Madagascar – Miarakap: mamatsy ireo PME hatramin’ny 1,2 miliara Ar | NewsMada
BNI Madagascar – Miarakap: mamatsy ireo PME hatramin’ny 1,2 miliara Ar
“Manohana anareo amin’ny tetikasanareo ny BNI”. Io ny lohahevitra nentin-dRalaimanisa Ndrina, talen’ny fifandraisana ao amin ‘ny BNI Madagascar, nandritra ny fampisehoana momba ny fikarohana eo amin’ny toekarena sy ny asa, natao teny amin’ny Oniversite Ankatso, ny 7 septambra teo. Nanohana izany hetsika izany rahateo ny BNI.
Manana renivola ao amin’ny Miarakap izao ny BNI, fampiasam-bola iraisan’ny vondrona orinasa maromaro ho famatsiam-bola sy fanohanana ireo PME sy ireo vao manomboka manangana izany. 100 tapitrisa hatramin’ny 1,2 miliara ariary ny azo raisina amin’izany. Manoro lalana tanora maro momba ny tetikasa arosony ny BNI amin’ny alalan’ny fandaharanasany Kiady.
Nasongadina nandritra ny famelabelaran-kevitra ireo tolotra samihafa ho an’ny mpanjifa, anisan’izany, ny fiantohana sy ny fanamorana ny fifandraisana (BNI Net, SMS…). Nampahafantarina, ohatra, ny MVola Avance ho famatsiam-bola ho an’ireo olon-tsotra, mpandraharaha, orinasa, mety hahazoana 500.000 Ar, miainga avy amin’ny fampiasana finday.
Tamin’io fotoana io koa ny fampahatsiahivana ny fe-potoana farany fandraisana anjara amin’ny Trophée du Jeune Entrepreneur (TJE), ny 8 oktobra ho avy izao, indrindra ho an’ireo tanora vao hiditra amin’ny sehatry ny fandraharahana. Efa misy ny fiaraharaha-miasa amin’ireo Antenimieran’ny varotra sy ny indostria ho fanohanana ireo orinasa madinika sy salantsalany (PME) amin’ny tetikasany.